VAIA20000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၂၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 20000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA20000
20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System uses stainless steel autovan filter column which is Viet An's strong product. With nearly 20 years of experience in the design and construction and installation of water purification equipment, water treatment systems, we are proud to bealeader in this product.
20000LPH VAIA20000 ရေစစ်က စတိန်းလက်စ်စတီးကော်လံကို အသုံးပြုပါတယ်။ ရေသန့်စင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဆောက်လုပ်တပ်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ နှစ် ၂၀ နီးပါး အတွေ့အကြုံအရ ကျွန်တော်တို့က ဒီပစ္စည်းတွေကို ထုတ်တဲ့နေရာမှာ ဦးဆောင်နေခြင်းကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
Collective image of Viet An company Viet An ကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့လိုက်ပုံ
System of pure water production line of Viet An operates effectively, saves investment costs. We always haveawarranty, long-term maintenance.
The capacity of 20000 liters / h is suitable for large capacity bottled drinking water facilities. If you are interested in water filtration products, please refer to the article introducing 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System through the article below.
ဒီရေစစ်က ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်တာကြောင့် အရင်းငွေကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အာမခံချက်နဲ့ တစ်သက်သာ ထိန်းသိမ်းမှုလည်း ပေးပါတယ်။
တစ်နာရီမှာ ၂၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ရေစစ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် 20000LPH VAIA20000 ရေစစ်အကြောင်းရေးထားတဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
Introduction of water filtration process of ro water filtration system 20000- VAIA20000
RO ရေစစ် 20000 VAIA20000 အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System hasacompletely self-contained, automatic filtration process.
20000LPH VAIA20000 ရေစစ်က ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အော်တိုရေစစ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
The source water will be filtered throughapre-filter system, heavy metal filtration, color removal, odor, detoxification, limestone filter and water softener, safe filtration and then filtered by RO membrane, disinfect and filter. bacteria. The whole filtration process is completely automatic, with no participation of workers. In particular, the system uses an automatic valve, capable of adjusting the filter column to wash the filter material inside the filter column to remove the residue on the filter materials and remove them through the wastewater line. . This contributes to the protection of the filter materials, filters, and filters, and also helps to stabilize the finished water quality and position.
ရေအရင်းအမြစ်ကို အကြိုရေစစ်၊ ကြီးမားသော သတ္တုရေစစ်၊ အရောင် အနံ့ အဆိပ်အတောက်၊ ထုံးကျောက်ရေစစ်၊ ရေကိုပျော့စေသောစက်၊ RO အလွှာပါး၊ ဘက်တီးရီးယားရေစစ်များကို အဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီး စစ်ထုတ်ပါမယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးက အလုပ်သမားတွေမလိုဘဲ အော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်က အော်တိုအဆို့ကို သုံးပြီး ရေစစ်ကော်လံထဲမှ အကြွင်းအကျန်များကို ဆေးကြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေစစ်ပစ္စည်းများ၊ ရေစစ်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး စစ်ထုတ်ပြီးတဲ့ ရေတွေကို အရည်အသွေးပြည့်မီစေပါတယ်။
Because every hour,alarge volume of water passes through the filters and filters, so it is necessary to replace the filter when reachingacertain water level to ensure the quality of the water source.
နာရီတိုင်းမှာ များပြားလှတဲ့ ရေပမာဏက ရေစစ်တွေကို ဖြတ်နေတာကြောင့် ရေရဲ့ အရည်အသွေးကို သေချာစေဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေပမာဏရောက်တဲ့အခါ ရေစစ်ကို လဲပေးရပါမယ်။
Below are the steps to replace filter elements for you to refer to.
အောက်တွင် လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Step 1: Before replacing the filters, be sure to disconnect the entire circuit system and the machine in the inactive state.
အဆင့် ၁- ရေစစ်တွေကို မလဲခင် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းစနစ်နဲ့ စက်က မလုပ်ဆောင်တော့တာကို သေချာပါစေ။
Step 2: Lock the source water pump valve, lock the booster valve, the solenoid valve to make sure there is no water leak or be pumped onto the system.
အဆင့်၂- ရေအရင်းအမြစ် ရေစုပ်စက် အဆို့၊ အားပြင်း အဆို့၊ သံလိုက်အဆို့တို့ကို စနစ်ထဲသို့ ရေယိုစိမ့်မှုမရှိအောင် ပိတ်ပါ။
Step 3: Turn the filter catridge open anti-clockwise.
အဆင့်၃-ရေစစ်တောင့်ကို နာရီလက်တံပြောင်းပြန် ဖွင့်ပါ။
Step 4: Take out the old core, clean the filter, replace the 20 ”stainless steel filter foranew one.
အဆင့်၎-အူတိုင်းအဟောင်းကိုယူပါ။ ရေစစ်ကို ဆေးကြောပါ။ ၂၀"စတိန်းလက်စ်စတီးရေစစ် အသစ်လဲပါ။
Step 5: Turn the filter catridge down and down clockwise, pay attention not to screw too tightly to avoid the phenomenon of running continuously but no water.
အဆင့်၅- ရေစစ်တောင့်ကို နာရီလက်တံအတိုင်း ဖွင့်ပါ။ အရမ်းကြီး အတင်းအကြပ် မလှည့်မိဖို့ သတိပြုပါ။
Step 6: Reconnect the power source, open the water supply valve. Let the water run slowly into the filter catridge until the water overflows, turn off the machine.
အဆင့်၆- ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို ပြန်ဆက်ပါ။ ရေပေးပို့တဲ့ အဆို့ကို ဖွင့်ပါ။ ရေကို ရေစစ်တောင့်ထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းစီးဆင်းပါစေ။ စက်ကို ပိတ်ပါ။
Step 7: Tighten the filter catridge and restart the VAIA 20000 line
အဆင့်၇-ရေစစ်တောင့်ကို တင်းကြပ်အောင်လုပ်ပြီး VAIA20000 လိုင်းကို ပြန်စပါ။
Experience using 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System
20000LPH VAIA20000 ရေစစ်ကို သုံးသော အတွေ့အကြုံ
Before using the device, you should carefully read and follow our instructions, if you do not understand or have difficulty using the device, please contact Viet An immediately.
စက်ကို မသုံးခင် လမ်းညွှန်မှုကို လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ စက်ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို နားမလည်ဘူးဆိုရင် Viet An ကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
The filters and the water supply and drainage pipes will often be deposited with dirt afteraperiod of use, so you should replace the above components periodically according to Viet An's maintenance standards and time.
အချိန်အနည်းငယ်ကြာ အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ ရေစစ်တွေ၊ ရေပေးပို့တဲ့ အရာတွေ၊ ပိုက်တွေမှာ အညစ်အကြေးတွေ ကပ်ကျန်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်ကဖော်ပြထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ လဲပေးသင့်ပါတယ်။
The best installation location is inacool place, without many obstructions, with little exposure to the sun. Also pay attention to humidity so that 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System autovalve is operated under the best conditions.
ပစ္စည်းတပ်ဆင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာကတော့ နေရောင်ခြည်အနည်းငယ်ရတဲ့ အေးမြသောနေရာ ဖြစ်ပါတယ်။20000LPH VAIA20000 ရေစစ်က အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာ အလုပ်လုပ်တာ သေချာအောင် စိုစွတ်မှုကိုတော့ ဂရုပြုဖို့ လိုပါတယ်။
Should put the machine in places near the water inlet, avoid places too far away or the water level is too low for the pump to pump the required amount of water.
စက်ကို ရေလက်ကြားနဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ရေပမာဏကို စုပ်တင်ဖို့ အရမ်းဝေးကွာလွန်းတဲ့နေရာ၊ ရေလယ်ဗယ် အရမ်းနိမ့်တဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Benefits of installing 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System
20000LPH VAIA20000 ရေစစ်တပ်ဆင်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
When first imported to Vietnam, at first these machines were not widely known due to the long-standing habit of Vietnamese people to use directly water from drilled wells. However, as life is enhanced, the awareness of health protection becomes more and more popular, becoming an indispensable device in daily life - due to its benefits:
ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေက ရေတွင်းကရေကို တိုက်ရိုက်သုံးစွဲတာ အချိန်ကြာမြင့်ခဲ့တာကြောင့် ဒီပစ္စည်းကို ဗီယက်နမ်မှာ ပထမဆုံးတင်သွင်းတုန်းက လူသိမများခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကြာလာတဲ့အမျှ ကျန်းမာရေးအသိပညာက အရမ်းကျော်ကြားလာပြီး နေ့စဉ်ဘဝမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
Water filtered through RO technology can be used immediately, no need to boil while ensuring safety and preventing disease. Water is replenished with minerals for the body, hasanatural sweet taste.
RO ရေစစ်ကို ဖြတ်ပြီး စစ်ထားတဲ့ရေက လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ရောဂါပိုးမွှားတွေ ကာကွယ်နိုင်တာကြောင့် ကျိုချက်စရာမလိုဘဲ ချက်ချင်းသောက်လို့ ရပါတယ်။ ရေထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပြီး သဘာဝ အချိုအရသာ ရှိပါတယ်။
The price is not too high, so it will save you money, and still get pure drinking water compared to using bottled water.
ဈေးကလည်း အရမ်းမကြီးတာကြောင့် ပိုက်ဆံလည်း ချွေတာနိုင်ပြီး သောက်ရေသန့်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
These types of 20,000 liter stainless steel purified water purification lines are integrated with automated stages, so manual steps are limited.
ဒီ ၂၀၀၀၀ လီတာ စတိန်းလက်စ်စတီးရေသန့်စင်လိုင်းတွေက အော်တိုအဆင့်တွေနဲ့ ပေါင်းထားတာဖြစ်လို့ လူတွေလုပ်ရတဲ့ အဆင့်တွေက ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
Very convenient to use, fast filtration capacity, outstanding large capacity to ensure the amount of filtered water according to the committed target.
အသုံးပြုဖို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ရေစစ်ခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မြန်တယ်။ ကတိပေးထားတဲ့ တားဂတ်ပြည့်မီအောင် ရေစစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။
Maximum power saving with noise and heat resistance to keep the machine running smoothly.
အသံဆူညံပေမယ့် ပါဝါချွေတာနိုင်ပါတယ်။ အပူကို ခုခံနိုင်တာကြောင့် စက်ကို ချောချော့မွေ့မွေ့ လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။
Instructions on how to test 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System genuine Viet An
20000LPH VAIA ရေစစ်က Viet An မှ ပစ္စည်းအစစ်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုစမ်းသပ်ရမလဲ
On the market there are many floating products, with unknown origin, making it difficult for users to make the right choice. Some tips to help you find yourselfagood and reputable machine fromasupplier and distributor are as follows:
ဈေးကွက်မှာ ဝယ်ယူသူတွေကို ပစ္စည်းအစစ်ရွေးချယ်ဖို့ ခက်ခဲအောင် အတုတွေ အများကြီးပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ ပေးပို့သူဆီမှ နာမည်ရှိပြီးသား ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အောက်မှာ အချက်တွေ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
- The water filter must be suitable for the water input source. Each water source and each water purifier product line has its own characteristics. Therefore, it is necessary to choose suitable for the characteristics of the water source to ensure water efficiency and quality.
-ရေစစ်က ရေအရင်းအမြစ်နဲ့ သင့်တော်ရပါမယ်။ ရေအရင်းအမြစ် တစ်ခုချင်းစီနဲ့ ရေစစ်လိုင်းတွေမှာ ၄င်းတို့ရဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေရဲ့ ကွာလတီ သေချာမှုရှိအောင် သင့်တော်တဲ့ ရေအရင်းအမြစ် လက္ခဏာကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
- 20000LPH VAIA20000 Purified Water Filtration System autoval must filter dirt, viruses, bacteria and harmful substances in the water, and heavy metals are potentially carcinogenic and toxic to health.
-20000LPH VAIA20000 ရေစစ်က ရေမှ အညစ်အကြေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ သတ္တုတွေက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အဆိပ်အတောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- Ensuring safety, saving, no electricity, no waste water.
-လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ ချွေတာမှု၊ လျှပ်စစ်မစားမှု၊ စွန့်ပစ်ရေ မရှိမှုတို့ကို သေချာစေခြင်း
- Good warranty, long-term, competitive price, reasonable.
-အာမခံချက်ကောင်းခြင်း၊ ကြာရှည်ခံခြင်း၊ ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း
- Haveaclear origin, have been inspected and have anti-counterfeiting stamps and poor quality goods issued by the Ministry of Public Security.
-ရှင်းလင်းသော မူလနာမည်ရှိခြင်း။ ပြည်သူလူထူ လုံခြုံရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ ပစ္စည်းအတု စာရင်းထဲတွင် ပါဝင်နေခြင်း
Warranty and maintenance procedures of Viet An are very simple, when in need of warranty and maintenance of water purification equipment, customers just need to contact 1900 6013, then there will beateam of technicians. Viet An's come to the house to guarantee and maintain products for customers.
Viet An ရဲက အာမခံချက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ဝယ်ယူသူအနေနဲ့ အာမခံချက်နဲ့ ရေစစ်ပစ္စည်းတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ ၁၉၀၀ ၆၀၁၃ ကို ဆက်သွယ်လိုက်ရုံပါပဲ။ နည်းပညာအဖွဲ့က အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ Viet An မှ ဝယ်ယူသူရဲ့ အိမ်ကိုလာပြီး ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
14 40” PP Filter Cartridge ၄၀ 20 unit VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက်ရုံသုံးစစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 unit VA/ USApec
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ်6unit VA/ USApec
18 RO membrane ROအလွှာပါး 12 unit Hitech-USA/CSM Korea
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက်6unit VA/ USApec
27 5-core Industrial filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်4unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယားစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 20 unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 20000LPH VAIA20000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်